Fitiavan-tena : Mpanimba ny fianakaviana (Fil. 2:3-5)
"Raha alavirina ny avonavona sy ny fitiavan-tena, dia dimy minitra ihany dia ho ampy hamahana ny ankamaroan'ny olana" - EW, t. 119.
Mpanota avokoa isika rehetra amin'ny maha-olombelona antsika. Ary inona no maneho mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra fa feno fahotana isika? Ny fontsika feno fitiavan-tena. Teraka miaraka amin'ny fitiavan-tena avokoa isika rehetra. Jereo fotsiny ny ankizy kely. Toa izao no voambolana tian'izy ireo indrindra: "izaho, izaho, izaho! " Amin'ny fotoana maha-lehibe antsika, dia mety mbola hiseho amin'ny fomba tena mahatsiravina kokoa io fitiavan-tena io, indrindra ao an-tokantrano.
Tonga anefa i Jesôsy mba hanova ny fontsika feno fitiavan-tena (Efes. 4:24). Mampanantena antsika ny Teniny fa tsy voatery hofehezinlo lafin-toetra marimba io isika, noho ny Aminy. Ny fiainany iray manontolo dia ohatra tonga lafatra ny amin'ny hevitry ny hoe miaina tsy misy fitiavan-tena. Ity misy fampanantenana mahafinaritra: arakaraka ny anahafantsika ny fiainany no handresentsika ny fitiavan-tena (1 Jao. 2:6)
Vakio ireto andininy eto ambany eto ireto. Inona no ambaran'izany amintsika momba ny fivelomana fiainana tsy misy fitiavan-tena?
Fil. 2:3-5 ............................................................................................................................................................................... 1 Jao. 3:16-18......................................................................................................................................................................
Vakio indray izay nosoratan'i Ellen G. White momba ny fitiavan-tena. Nosoratany fa mety ho voavaha tena haingana ny ankamaroan'ny olana raha toa ka alavirina ny avonavona sy ny fitiavan-tena. Tena zava-dehibe izany satria raha tsy vahantsika haingana ny olantsika, dia hilona ao izany ka hiova ho lasa zavatra mahatsiravina amin'ny farany. Koa ilain'ny mambran'ny ankohonana rehetra, indrindra ny ray aman-dreny, ny hafahana amin'io fahotana io (Ohab. 16:6). Tsy vitantsika samirery anefa izany fa mila ny fanampian'i Jesôsy Koa manasa antsika Izy mba ho eo am-pototry ny hazo fijaliana ka handohalika eo amim-bavaka, amim-pinoana, amin-dranomaso. Manasa antsika koa izy mba hanolotra Azy ny fontsika manontolo ary hangataka Azy mba hanasa antsika ho afaka amin'ny fahotantsika.
Ora firy no atokanao eo am-pototry ny hazo fijaliana mba hiadiana amin'ny fahotana eo amin'ny fiainanao, indrindra ny fitiavan-tena? Ahoana no anampian'ny Mat. 7:16 anao hahafantatra raha toa ka mila fotoana fanampiny itoerana eo ianao?